Hopitaly Affiliated faharoa an'ny University Medical Harbin - siansa sy teknolojia Technology Doneax CO., LTD
Hopitaly Affiliated faharoa ao amin'ny Oniversiten'i Harbin Medical
Ny Hopitaly Affiliated Faharoa an'ny Harbin Medical University, natsangana tamin'ny 1954, dia hopitaly kilasy voalohany feno kilasy faha-3 amin'ny kilasy 3. Manatevin-daharana fitsaboana, fampianarana, fikarohana ara-tsiansa, fisorohana, fikarakarana ara-pahasalamana ary fanarenana.
Ny hopitaly dia mirefy 500,000 metatra toradroa sy velarana fananganana 530.000 metatra toradroa. Manana sampam-pitsaboana 1 izy, sampana marary 11 ary hopitaly 4 "hopitaly marary", hopitaly aretim-po, hopitaly misy endrika ary hopitaly diabeta. Misy mpiasa maherin'ny 4500 ao amin'ny hopitaly. Amin'ny maha College Medical Clinic faharoa an'ny Harbin Medical University dia manana mari-pahaizana doctorat 3 manome toerana misy fifehezana voalohany -velona, ​​21 diplaoma doktorà manome toerana misy fifehezana faharoa -velona, ​​ary mari-pahaizana doctorat sy master 33 manome toerana misy fifehezana fahatelo.
Ao amin'ny hopitaly dia misy 5.200 metatra toradroa amin'ny tranobe fampianarana tsy miankina, 5.000 metatra toradroa ny "Ivotoerana fampisehoana fanandramana fanandramana nasionaly" ary "Ivontoerana fampianarana fanandramana fanandramana ara-panatanjahantena nasionaly", 22000 metatra toradroa amin'ny "toby fampisehoana fiofanana klinika ho an'ny mpitsabo ankapobeny", 14000 metatra toradroa amin'ny trano fianarana ambaratonga voalohany ary 16,000 metatra toradroa amin'ny trano fianarana nahazo diplaoma. Hatramin'ny drafitra dimy taona faha-12, boky fampianarana 18 ho an'ny drafitra nasionaly sy boky fampianarana an-tsary dia nohamarinin'ny olona mifandraika amin'ny hopitaly, ary boky 12 no novain'ny mpiara-miasa aminay ho mpanonta mpiara-miasa raha ny mpiara-miasa sasany kosa nandray anjara tamin'ny fanovana boky 47. . Tao anatin'izay telo taona lasa izay dia tetik'asa fampianarana 51 mihoatra ny faritry ny departemantan'ny tanàna no nankatoavina, ao anatin'izany ny tetikasa 1 CMB; Valim-pampianarana 19 ambonin'ny faritry ny departemantan'ny tanàna no azo; Taratasy fampianarana nasionaly 94 no navoaka. Mahatanteraka ny fifanakalozana sy fiaraha-miasa avy any ivelany, manana fifandraisana marobe amin'ireo oniversite 26 sy sekoly fitsaboana, ao anatin'izany ny University of Pittsburgh, ny University of Miami, ary ny University of Toronto any Canada, ary nanao fiaraha-miasa fikarohana siantifika marobe.